VaMutodi vanoti MDC iri kuda kushandisa kuratidzira uku senzira yekupidigura hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo.
VaMutodi vanoti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakasarudzwa zviri pamutemo, nokudaro vacharamba vachitonga kudzamara dzimwe sarudzo dzaitwa muna 2023.
Asi vanoti vari kushamisika zvikuru kuona MDC ichironga kubvisa VaMnangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo.
Asi MDC inoti iri kuratidzira ichashandisa kodzero dzayo dzakachengetedzwa nebumbiro remitemo yenyika.
VaChibaya vanoti zvisineyi kuti havasati vawana mhinduro kubva kumapurisa, kuratidzira kwavo kuri kuenderera mberi nemusi weChishanu.
Asi VaMutodi vanoti MDC inogara yakati icharatidzira murunyararo asi ratidziro idzi dzichizopedzisira dzaita mhirizhonga.
VaMutodi vanotiwo sebato reZanu PF riri kutonga, vari kuzviziva kuti MDC iri kuratidzira kuitira kuti VaMnangagwa vabviswe pachigaro.
“Vakuru vari kuti vachange vari mberi mekuratidzira uku ndinovayambira kuti vasazoyeuka bako vanaiwa,” vadaro VaMutodi.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mashoko aVaMutodi haana kunaka sezvo achiratidza kuti havatevedzeri mitemo yenyika.
Kuratidzira kuri kurongwa neMDC kunotevera kurudziro yakaitwa muna Ndira nesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions yekuti vanhu vagare mudzimba dzavo kwemazuva matatu.
Asi vanhu vakapinda mumigwagwa vachiratidzira.
Kuratidzira uku kwakapedzisira kwaita mhirizhonga iyo yakaona vanhu vanosvika makumi maviri vachifa mushure mekupfurwa nemabara epfuti.
Sangano ravanachiremba vanorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, rinoti pamhirizhonga yakaitika muna Ndira, pane vanhu makumi matanhatu nevasere vakarapwa maronda akakonzerwa nemabara epfuti, uye vanhu vanodarika zana vaive nemaronda airatidza kuti akakonzerwa nesimbi nezvimwe zvombo zvinocheka.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mumazuva matatu akadaidzirwa neZCTU kuti vanhu vagare mudzimba dzavo, vakaona mapurisa achishandisa zvombo zvehutsi hunokachidza pavanhu vairatidzira vasina zvombo, uye vakaonawo masoja aive nepfuti dzemhando yeAK-47.